Mpamafa soloina solo-pamonoana mpamatsy - Mpamafa endrika famonoana ambongadiny, mpanamboatra, orinasa
Ny hatsaran-tarehy madio tsy misy fangarony vita amin'ny volotsangana dia manala ny solo-tarehy
IREO VOAFITRA INDRINDRA CHARCOAL INDRINDRA INDRINDRA MBOLA HANARAKA NY HERIN'NY BAMBOO voajanahary izay manadio sy mamaritra ny hoditra mandritra ny famoahana ireo fahalotoana sy ireo mpanao politika. HANDEFANA NY HITSINY DIA MBOLA HAMASININA ARY MORA NY FITAOVANA.
Manadio sy manadio ny spascription activated arinafafa soloina
Io famafana fanesorana makiazy io dia ampiana amin'ny karbaona voajanahary voajanahary, izay afaka manadio sy mamoaka azy io, ary misy vokarin'ny bakteria sy anti-inflammatoire. Tsy ho maina loatra ny hoditra noho ny famonoana bakteria amin'ny tarehy, vovoka ary akora simika. Ny fampidirana ny aloe vera dia mahatonga ny effet moisturizing an'ny tavy mando mahomby kokoa ary mikarakara ny hoditrao sy ny volon'ny volonao.
Manafoana ny hodi-tava ny hoditra malemy hoditra malemy paika manafoana ny hamafana ny hamafana ny hoditra
Ny famafazana ny tarehy dia mamelona ny hoditrao rehefa manaisotra ny tarehy sy ny tarehy amin'ny mason-tarehy. Ireo lamba famaohana malefaka malemy fanahy ireo dia ampidirina amin'ny akaizy hodiovina sy hamelomana ny hoditrao, ary hahatonga anao ho malemy sy hita taratra.